Public Health in Myanmar: HIV tests (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ) စစ်ဆေးနည်းများ
ဆရာခင်ဗျား သိချင်တာလေးတစ်ခုဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ၂၉-၁၀-၂၀၁၁ သွေးစစ်တာ
hiv 1/ hiv2Antibody (ELISA)
HBs Antigen Non-Reactive
HBs Antibody 62 mIU/ml (>10)
အဲဒိအဖြေက ပြီးခဲ့တဲ့ ဘယ်နှစ်လထိ အကျူံးဝင်ပါသလဲခင်ဗျာ။
Anti-HBs ဆိုတာ Antibody to hepatitis B surface antigen ဘီပိုးရဲ့ မျက်နှာပြင်က ရောဂါရစေတဲ့ (အင်တီဂျင်) ကို ခုခံတိုက်ဖျက် ပေးနိုင်တဲ့ (အင်တီဘော်ဒီ) ရှိနေတယ်လို့ ဆိုတာဖြစ်တယ်။
တနည်းအားဖြင့် ခုခံအား ရှိနေတယ်။ တနည်းပြောရရင် Immunity ရောဂါပြီးနေသူ ဖြစ်တယ်။
(က) HBV infection (အင်ဖက်ရှင်) ရထားလို့ဖြစ်ဖြစ် (ခ) Vaccination ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားလို့ ခုခံနိုင်စွမ်းရနေတာ ဖြစ်တယ်။ Immune response (အင်မြူးန်) တုံ့ပြန်မှု လုပ်တာလို့ ခေါ်တယ်။
HBsAb လို့လဲ ခေါ်ပေမဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် အတိုကောက်နဲ့ လွဲတတ်တယ်။
ကာကွယ်ဆေးမှန်သမျှ ဆေးပါတ်စေ့ရင် နောက်ထပ်ထိုးစရာ မလိုဘူး။ ဆိုလိုတာက အခုလို ရောဂါပြီးဓါတ် ရှိနေတာဟာ တသက်တာအတွက် ဖြစ်သွားတယ်။
သိချင်တာတစ်ခုရှိလို့ပါဆရာ၊ အရေပြားက အထိအခိုက်မခံဘူးဖြစ်နေလို့ပါ.. တစ်ခါတစ်ရံ ယားပြီး အနီကွက်လို အနီဖုလိုဖြစ်တယ်ဆရာ.လေးလံတဲ့အထုပ်အပိုးတွေဆွဲရင်လက်ဖဝါးနဲ့လက်ချောင်းတွေမှာ သွေးခြေဥ သလို နီရဲပြီး အဖြူဖု လေးတွေဖြစ်တယ်ဆရာ...တစ်ခါတစ်ခါ လည်ပင်းကယားပြီးနီတယ်ဆရာ... စာရေးခုံပေါ်လက်ထောက်ပြီးတင်ထားရင် ခုံနဲ့လက်နဲ့ထိတဲ့နေရာမှာ အနီဖုလေးတွေဖြစ်ပါတယ်၊အဲလိုဖြစ်တာ ၉ လလောက်ရှိပါပြီ. ၉လ အတွင်း ကိုယ်အလေးချိန်လည်း တက်လာပါတယ်၊ အဲဒါ HIV ပိုးနဲ့ဆက်စပ်မှုများရှိပါသလားဆရာ. လွန်ခဲ့တဲ့ ၉လ က လိင်ဆက်ဆံ ပြီးမှဖြစ်တာ ပါ၊ စဖြစ်ကာစတုန်းက ခြေထောက်တွေယားပါတယ်..
ဆရာ ကျွန်နော်တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ ပါ။HIV ပိုးရှိမရှိကို ဆေးခန်းတွေမှာ သွားပြီး စစ်ဆေးနိုင်ပါသလား။အဖြေကကော အမှန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ တကယ်လို့ HIV ကူးစက်ခံနေရပြီဆိုလည်း ပုံမှန်အတိုင်းနေထိုင်သွားဖို့ ဘယ်ဆေးတွေကို သောက်သုံး သင့်ပါသလဲ။ အဲလိုမျိုး ဆေးတွေရောရှိပါသလား ။ ရှိတယ်ဆိုလည်း အဲမျိုး ဆေးတွေကို သောက်သုံးနေရင် ဘယ်နှစ်နှစ်ထိ အများဆုံး အသက်ရှင်နိုင်ပါမလဲ။ ပုံမှန်လူတစ်ယောက်လိုပဲ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါ့မလား သိချင်လို့ ပါ------